माइतीघरमा किन एक्लै आन्दोलनमा उत्रिए यी डाक्टर? [भिडियो]
कमला गुरुङ शुक्रबार, चैत २०, २०७७, १६:४८
काठमाडाैं- दिउँसोको करिब चार बजेको समय। माइतीघरको व्यस्त सडक। मानिसको भीडभाड अनि सवारी साधनको चाप। त्यही भीडमा उभिएका एक एक्ला युवा।
माइतीघरको बीच सडकमा उनी एक्लै थिए। तर झट्ट हेर्दा उनलाई पहिचान गर्न गाह्रो थिएन। सेतो एप्रोन, मुखमा मास्क अनि हातमा लिएको पम्पलेट नै परिचयका लागि काफी थियो।
माइतीघरबाट आहोर दोहोर गर्ने जो कसैले उनलाई एक पटक नियालिरहेकै हुन्थे। कति त एकछिन उभिएर हेरिरहन्थे। केहीले त एक्लै के गरेको होला भन्दै पनि जान्थे।
उनले लिएको पम्पलेटमा लेखिएको छ, ‘मेरो कोभिड १९ को भत्ता हराएको सूचना कृपया पाउने महानुभावले सम्पर्क गरिदिनुहोला। धन्यवाद। मास्क सेनिटाइजर र सामाजिक दूरी कायमै छ! तर तपाईको नियम कायम छैन!! सरकार’
उनी हुन्, निजामती (सिभिल) अस्पतालका मेडिकल अफिसर डा अजित मल्लिक। माइतीघर मण्डला छेउको बीच सडकमा उनी यही पम्पलेट लिएर दैनिक २ देखि ३ घण्टा उभिन्छन्। त्यो पनि एक्लै। न कुनै समूहसँग न कुनै संस्थासँग।
उनी यसरी सडकमा आउनुको एउटै कारण छ, ‘कोभिड भत्ताको माग।’
कोभिड १९ विरुद्धको उपचारमा खटिए बापतको जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै उनी बिहीबारदेखि यसरी नै माइतीघर मण्डलामा धर्ना स्वरुप उभिन्छन्। अस्पतालको ड्युटी सकेर आफ्नो व्यक्तिगत समयमा यहाँ धर्ना दिन आएको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘मेरो ड्युटी हुन्छ। म ड्युटी गर्छु। सकेर यहाँ धर्नामा आउँछु। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन म यसरी यहाँ धर्नामा आएको हुँ।’
आफ्नो मागको लागि आफु एक्लै नै काफी भएको उनको भनाई छ। यसरी सडकमा आउनु अघि आफुले कुनै साथीभाई तथा समूहसँग छलफल नगरेको र आवश्यक पनि नभएको उको भनाई छ।
‘यो छलफल गर्ने विषय होइन। म कुनै आन्दोलन गर्न आएको होइन। म एक्लै हो। मलाई खाँचो छ। म सडकमा आएँ’ उनले भने।
कोभिड १९ विरुद्धको लडाईमा होमिएको एक वर्ष भएपनि हालसम्म कोभिड भत्ता नपाएको उनको ठुलो गुनासो छ।
उनलाई धेरैले एक्लै गएर केही हुँदैन। नजाउ पनि नभनेका होइनन्। तर डा मल्लिकले एउटै जवाफ दिने गर्थे, यो मेरो आवश्यकता हो। म एक्लैले गर्न सक्छु।
कोभिड भत्ता नपाएसम्म दैनिक यसरी नै धर्नामा बस्ने उनले बताए। अस्पतालले कोभिड भत्ता दिने बहानामा आफुलाई आश्वासन मात्र दिने गरेको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘यो मैले भिक मागेको हो र? ज्याला गरेको छ। कोरोना उपचारमा खटिए बापतको भत्ता मात्र मागेको हुँ।’
कोरोना उपचारको क्रममा उनी आफैँ पनि संक्रमित भए। तर यसमा उनको कुनै गुनासो छैन। उनको गुनासो भनेको कोभिड भत्ता नदिएकोमा मात्र हो। डा मल्लिक यही भदौबाट सिभिल अस्पतालमा कार्यरत छन्। यसअघि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत थिए। त्यहाँ खटिदा पनि कोभिड भत्ता नपाएको उनी बताउँछन्।
सरकार स्वास्थ्यकर्मीको अधिकार र प्राथमिकताका विषयमा संवेदनशील नभएको उनको अनुभव छ। तर उनलाई सरकारसँग पनि कुनै गुनासो थिएन। उनलाई आफु कोभिड महामारीमा खटिदाको भत्तासँग मात्र सरोकार छ।
‘मेरो पैसा मलाई दिनुस, म घर जान्छु। कोरोना लाग्यो मलाई तर बिमा पनि गरिदिएन। तर २४ सै घण्टा मलाई खटाइयो। डाक्टरलाई सरकारले सम्मान गर्न सकेन’ उनले भने।
नेपालमा फेरि बढ्दै कोरोना संक्रमण, सरकारको फितलो तयारी
पढाइको प्रतिस्पर्धाले जुराएको प्रेम